Anigu inta baddan waxaan qabbaa calool xanuun ama madax xanuun. Waxaan dareemaa guud ahaan in aanan ficnayn. Dhakhtarku ima caawin karo. Hadda waxaa la iga rabaa in aan aado daaweyn cilmi nafsi ah. Miyaan waalanahay? – Tips for refugees
Anigu inta baddan waxaan qabbaa calool xanuun ama madax xanuun. Waxaan dareemaa guud ahaan in aanan ficnayn. Dhakhtarku ima caawin karo. Hadda waxaa la iga rabaa in aan aado daaweyn cilmi nafsi ah. Miyaan waalanahay?
Adigu ma waalnid.
Waxaa jira xanuunada qaar kuwaas oo daawo u baahan.
Ama waxaad u baahnaanaysaa in aad biloowdid cunida ama cabida wax ka duwan wixii hore si aad u dareentid ficnaansho.
Kadibna waxaa jira xanuuno kale halkaas oo aan caddeyn waxa lagu daaweeyo.
Midaan waa sida xaalada xanuunada-caloosha iyo madaxa, tusaale ahaan.
Dhakhtarku wuxuu isku dayayaa in uu oggaado sababta keentay xanuunkaaga.
Midaan waxay noqon kartaa mid mararka qaar ay adagtahay maadaama ay sababtu noqon karto mid nafsiyan ah.
Haddii aysan kaa helin wax dhib ah oo ku haysta waxay kuu diraysaa daaweeye.
Daaweeyayaashu waa dhakhtaro cilmi nafsi ah kuwaas oo adiga kula hadlaya inbaddan.
Kadibna waxay isku dayaan in ay oggaadaan sababta keentay xanuunkaada.
Midaan adiga ayay kuu fiicantahay.
Waxaa jira sababo baddan oo xanuunka keena:
Sidoo kale xanuunka wuxuu ka dhashan karaa wel-wel, cabsi ama musiibo weyn. Ama wax aad u xun oo aad hore ula kulantay.
Daawada ayaa caddeynaysa sababta aad u dareemaysid xanuunka.
Iyo sida loo joojinayo xanuunkaada.
Alle haku caafiyo!
Posted on March 30, 2017 March 30, 2017 Author editorialteamCategories Help - Hilfe
Previous Previous post: Hooyaday iyo ayeeyaday waxay dhahaan: “Haddii ay gabar fadhiisato ayada oo ay lugaheeda kala fogyihiin midaasi macnaheedu waxay tahay gabadhaasi ma ahaanayso mid bikrad ah.” Run miyaa arintaasi?
Next Next post: Anigu waxaan ahay wiil 14 sanno jir ah. Haddii aan sameeyo wax khalad ah, aabahayga wuu i garaacayaa. Anigu aadbaan u ixtiraamaa aabahayga. Si kastaba, Waxaan doonayaa in uu arintaasi joojiyo. Sideen ugu sheegaa?